Zvinetso zvezvemamiriro ekunze zvegore rino neavo vanouya! | Green Renewables
Tomàs Bigardà | | Simba rekuchengetedza, Ecology, Renewable simba, Environment, Nyowani matekinoroji
Kupfuura nakare kose munhoroondo yevanhu, isu tine maoko edu ramangwana yepasi sezvatinozviziva uye tinotarisana nenhevedzano yematambudziko ezvakatipoteredza.
Tevere tichaona kuti matambudziko aya ndeapi uye zvinonetsa izvo zvavanogona kuuya nazvo.
1 Matambudziko makuru ezvakatipoteredza
2 Kukura kwevanhu
3 Kubata zvakanyanya
4 Kupera kweMineral Resources
5 Remangwana renyika mumaoko edu
Matambudziko makuru ezvakatipoteredza
Mumakore gumi apfuura tiri kuona matambudziko akati wandei ayo tyisidzira ramangwana redu senzanga:
Kukura kukurumidza yehuwandu hwevanhu.
El kupera simba yezvicherwa zviwanikwa.
Kunyanya kushandiswa kwe Kubata zviwanikwa uye kudzipwa nemakungwa.
Kuwedzera iyo kusvibiswa yevhu nemvura.
Kutsakatika kwezvakawanda mhando.
Kuburitswa kwakawanda kwe magasi anodziya greenhouse inokonzeresa kupisa kwenyika.
Musi waGumiguru 30, 2011 takapfuura vagari vanomwe mabhiriyoni pasi.
Muna 2016 vakatodarika zviuru mazana manomwe nemazana mana uye parizvino tatova pamusoro pemamirioni mazana manomwe (7400 chaiyo panguva yekunyora iyi positi maererano Worldometers).
Zvinoenderana nezvakafungidzirwa zviri pamutemo, muna 2050 uye kana pasina chinochinja, zvinokwanisika kuti mabhiriyoni gumi asvike.
10.000 bhiriyoni vanhu vanozoda kudya, kunwa, kupfeka, kufamba, kurima, nezvimwe.
Izvo zvinoisa kumanikidza kune ecosystems uye zviwanikwa zvisati zvamboitika. Muenzaniso wemhedzisiro inowedzera huwandu hwevanhu pane iyo ecosystems tinayo mukuredza.
Sezvo kuravira kwekudya kwawedzera epicurean uye globalized, chishuwo chesushi nehove dzegungwa nehove zvakave zvepasi rose.
Nyika dzakaita seSpain mune hove yaive yatove chikamu zvakakosha pakudya kwedu, yakangowedzera kushandiswa uku uye yakaita kuti iwedzere kuwanda.
Iko kuvandudzwa kwezvivakwa kwakaita kuti zvikwanisike idya hove nyowani chero kupi zvako munyika. Asi maitiro aya akawedzera pasirese, zvichikonzera zvikepe zvekuredza kuenda kundoredza kunzvimbo dzekuredza dziri kuwedzera kure.
Dambudziko nderekuti chishuwo ichi chakanganisa kugona kwekubereka kwemakungwa, zvekuti ayo yakanyanya mwero yekubata munzvimbo dzese dzekuredza dzepasi.
Aya ndiwo maitiro anogara achiitika nenzira imwechete; apo kubata kunowedzera mune imwe nzvimbo, kugadzirwa kwehove munzvimbo iyoyo kunowedzera kusvikira kwasvika pakakwirira mushure mezvo kubata kwacho kunodzikira uye hakudzokere svika pakakwirira zvakare.
Zvakanaka, muna 2003 yakanga yatosvika pakukwirira kukuru mumakungwa ese epasi. Icho chiri chikonzero ichi kuti mapurazi ehove akawedzera se alternativa kudzikira kwekubata mumakungwa.
Ndiyo zvakare tsananguro yezvatinogona kuwana mamwe akawanda marudzi muvatengesi vehove vasina kudyiwa kusvika makore mashoma apfuura.
Kupera kweMineral Resources
Nyika yedu ine zviyero uye a kuwanda yezvakatsunga uye zvine zviwanikwa. Iko kushandiswa kwezviwanikwa kunosvika, kunyepedzera kusava nehanya kuti vachaneta, nekuwedzera ratyama, haina kururamisira zvakananga kuzvizvarwa zvinotevera.
Kana chicherwa changotorwa pasi hachichakwanise kuburitswa. Saka iyo kushandisa zvine musoro kuti zvinoitwa zvakakosha uye kuti iyo chete inonzwisisika chinzvimbo cheramangwana kugadzwa kwehurongwa hwe hupfumi yakatenderera nenzira yekuti zviwanikwa izvi hazvidyiswe asi kuti zvinoshandiswa.
Izvi hazvireve chete kuti zvinhu zvinodzokororwa, asi izvo kana zviripo dhizaini uye gadzira Izvo zvatove kutariswa kuti mushure mekushandisa izvi zvisingadzoreke zviwanikwa zvinofanirwa kuzokwanisa kushandiswa zvekare.
Remangwana renyika mumaoko edu
Ichokwadi ndechekuti kunyangwe paine zvese zvinoita kunge zvipingamupinyi zvezvakatipoteredza uye kunyangwe paine kutyisidzira uku kwekunyepedzera, nhasi tine maturusi akawanda kupfuura nakare kose kukunda matambudziko ese aya.
Ruzivo rwuripo nhasi rwezvinoitika kwatiri, nei zvichiitika kwatiri uye maitiro ekuwana mhinduro yakakura kudarika nakare kose.
Tine muruoko rwedu maturusi ekurera a imwe nzira yekuvandudza modhi. Zvichida nekuda kwechikonzero ichi uye nerumwe rudzi rwekutsamwa kwaMwari, ndisu isu tinofanirwa kutarisana nedambudziko rakakura iro vanhu vasina kumbosangana naro kare:
Shanduko Yemamiriro ekunze inokonzerwa ne kupisa kwepasi pose zvakakonzerwa nekuedza kwedu kuburitsa zvisaririra carbon dioxide nenzira inotyisa mumakore zana apfuura zana nemakumi mashanu.
Nhau dzakanaka ndedzekuti isu tiri ivo chizvarwa chekutanga kuva nesu maturusi ekumisa kutyisidzira uku uye kururamisa nzira yedu yekugara pasi rino takananga kune iyo inodzivisa iyo migumisiro yakaipa kwazvo.
Chakaipa ndechekuti isu pamwe tichava vekupedzisira mukukwanisa kuishandisa nezvivimbiso zvekubudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Zvinetso zvezvakatipoteredza zve2017
Anoda kusvika makumi matatu makumi matatu akamirira kumiswa kwematare ekucheka kuti awedzere simba muICSID
Simba remazimbe pamwe nemhedzisiro yaro sosi yesimba